Meu Pé de Cacau - Studio Acerola in Paúl do Mar - I-Airbnb
Meu Pé de Cacau - Studio Acerola in Paúl do Mar
Paúl do Mar, Madeira, i-Portugal
U-Jan Ungumbungazi ovelele
I-Meu Pé de Cacau iyigadi yezithelo yasendaweni ezungezwe amatshe amahle kakhulu enyakatho-mpumalanga kanye noLwandle olukhulu lwe-Atlantic oluya eningizimu-ntshonalanga.
Ama-studio amane aklanywe kahle futhi akhiwe ngendlela engalimazi imvelo ahlanganyela indawo enendawo yokubhukuda engenamkhawulo, izindawo zomphakathi, nezitshalo zikanokusho ezibungaza amakhulu ezithelo ezihlukahlukene zasenkabazwe, ezitshalwe ezindaweni zendabuko zokulima ezenziwe ngamatshe e-basalt.
Sithemba ukuthi uzothola i-Meu Pé de Cacau indawo yokokuzithokozisa okulandelayo okucabangayo — ukuhamba ngezinyawo eceleni kwe-West Coast yase-Madeira, ukutshuza e-Paúl do Mar 's tubular amagagasi amakhulu, uzifaka ezinambithekeni ezintsha ngokuphelele, noma uziphe isikhathi sokufunda leyo ncwadi enhle elandelayo.
Vuka ngokubukeka okuqondile kolwandle nengadi yethu ye-cactus. Ngaphandle, i-studio sinikeza i-patio yangaphandle yangasese enendawo yokudlela kanye ne- swing net. Ngaphakathi, uphathwa ngombhede ontofontofo wenkosi, igumbi lokugezela langasese elineshawa yemvula, nendawo yokuphumula enosofa, itafula lokudlela, nekhishi elincane.
Izindawo ezivamile ze-Meu Pé de Cacau zine-pool engenamkhawulo (engafudunyeziwe), indawo yokudlela yangaphandle, ikhishi langaphandle elinesitofu esishisayo kanye nohhavini, kanye nendawo yokosa ephindwe kabili njenge- kiln yokubhema. I-Espresso nemishini yekhofi yokuhlunga nakho kuyatholakala ekhishini langaphandle.
Phakathi nezingadi, ungathola amakhambi nezinongo eziningi ezingasetshenziswa.
Sinikeza i-Wi-Fi yamahhala enokwethenjelwa esitudiyo nasezindaweni ezivamile zomphakathi, enesivinini esingafika ku-300mbit/s.
5.0 · 56 okushiwo abanye
I-Paúl do Mar iziqhayisa ngalokho okuphawulekayo isimo sezulu esincane kakhulu esiqhingini. Kakhulu kangangokuthi ngisho sinama-coconut Palms lapha :-) Ngesimo sezulu esipholile, jabulela amabhishi amatshe e-pebble futhi ungapheli ama-sunsets, imizila emihle yokuhamba ngezinyawo futhi uhlole izihlahla eziseduze. Lapho umoya namagagasi ekhuphuka, ngena ebhodini lokutshuza noma i-kite. Ukuqwala izintaba okumbalwa okuyinselele kuqala lapha, njenge-Caminho Real 23, exhuma emadolobhaneni angomakhelwane ase-Prazeres empumalanga nase-Fajã da Ovelha entshonalanga. Kanye ne-2km promenade, uzothola amabha nezindawo zokudlela ezimbalwa ezithakazelisayo. Kukhona nesitolo esincane esiseduze.
Sijabule kakhulu ukukusiza ngesikhathi uhlala. Futhi njengoba sivame ukuba endaweni sinakekela ipulazi, ungangabazi ukusibuza ngembali ngayinye, isithelo noma isitshalo. Sizobonana maduze.
Inombolo yepholisi: 113044/AL
Izilimi: English, Suomi, Português, Español
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$161.
Hlola ezinye izinketho ezise- Paúl do Mar namaphethelo